Labo wiil oo iskaga dhagan caloosha ayaa kudhasheen Mombasa. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Labo wiil oo iskaga dhagan caloosha ayaa...
Labo wiil oo iskaga dhagan caloosha ayaa kudhasheen Mombasa.
Laba wiil oo matana ah islamar ahantasina iskudagan ayaa waxaa ey kudasheen isbitaalka guud ee magala xeebetka mombasa subaxnimadhii hore ee shalay, carurtan yar ayaa waxaa ey yihiin kuwa iskagadan dinaca calosha . dakhatirta latacalaeysay labadani wiil ee yar ayaa waxaa ey dalbadheen in losiduliyo carurta isbitaalka qaranka ee kenyata national hospital ee casimada nairobi si lolatacalo sidhii lokalabujinlaha.
Iqbal Khandwalla oo ah mamulaha isbitaalka mombasa ayaa waxaa ushegay in misaanka carurtani iskudagan uuu ahaa ilaa 4.6 kg.
Mr iqbal ayaa intaasi kudaray in ey carurta usiduliyeen cisbitaalka kenyata si qalin logusameyo madama isbitaalka maombasa uusan latacalikarin .
Dr khandawala ayaa intaasi kudaray in carurta ey yihiin kuwa lobahanyahay in laoqadho goboota rasmiga ah ee ey iskagadaganyihiin kadib qalin lagusameyo.
Ugudambeyn dakhtarka ayaa shegay in hoyadha carurta oo lagumagacawo Eunice Auma ey xaladeda tahay mid wanagasan laguna dabiyayo qeybta bukaan jiifka ee isbitaalka guud ee mombasa.